Diyaar garowga ciida iyo qalab ay ganacsatada u keeneen caruurta oo laga deyriyay – Balcad.com Teyteyleey
Goobaha ganacsiga magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ayaa si xowli leh looga dukaameysanayaa, iyadoo diyaar garow xoogan loogu jiro dabaaldegga ciida Soonfur oo maalinta berri ah dhaceysa.
Waxyaabaha ay dadku inta badan iibsanayaan ayaa waxaa ka mid ah macmacaanka sida Xalwada, Buskudka iyo cuntooyinka fudud oo loogu talo galay in la isticmaalo maalinta ciida ah, taasi oo sababtay inuu sare u kac ku yimaado raashinka iyo cunooyinka kale ee daruuriga ah.
Diyaar garowga ciida ayaa si weyn uga duwan ciidihii hore, iyadoo suuqyada dalka iyo guud ahaan goobaha ganacsiga ay iminka noqdeen kuwo mashquul ah oo si aad ah uu u kala socdo ganacsiga.
Dhinaca kale qalabka ay caruurta ku ciyaaraan ayaa sanadkaan noqday mid xowli leh, isla markaana la keenay qalab kala duwan oo ay ku jiraan hub macmal ah sida Bastoolado, Qoyaha fudud, kuwa garabka laga tuuro iyo baaruud nooc kasta oo ay tahay.
Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrintaasi, iyagoona ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keeni karaan qalabkaasi iyadoo waliba ay jiraan khataro dhinaca amniga ah.
The post Diyaar garowga ciida iyo qalab ay ganacsatada u keeneen caruurta oo laga deyriyay appeared first on Ilwareed Online.
Maxaabiis ku geeriyootay xabsiga dhexe ee Xamar iyo kuwo kale xaaladooda laga deyrinayo